तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अ’चा’नक घर बोलाएर किन ह, x-त्या गरियो? – Dainik Sangalo
तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अ’चा’नक घर बोलाएर किन ह, x-त्या गरियो?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २४, २०७८ समय: ११:१२:५१
तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अ’चा’नक घर बोलाएर किन ह,x-त्या गरियो?प्रेम सुनार बुटवल । हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको र-मझ-म भित्रिएको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै रह-स्यम-य मृ,x-त्यु घ-टना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँ-धि-एकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रह-स्य-मय मृ,x-त्यु भएको घ-ट-ना सार्वजनिक भएको छ । उक्त नगरपालिका-५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा र-ह-स्यम-य मृ,x-त्यु भएको घ-ट-ना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् ।
भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे । उनले श्रीमानको ब-च-न हा-र्न नसकी उनी घर फर्किइन् ।
उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार रxक्ता-म्मे अवस्थामा सीताको मृ,x-त्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बे -हो-स भई ढ-ले ।प्रत्यक्षदर्शी माइतीजनका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठामा मुखबाट र -ग -त ब-गेको, ग लामा चु- ङ्गीले क सि-एको र भुँ-ईमा ल -डेको अवस्थामा भदौ २० गते विहान मृ-त फेला परेकी थिईन् ।
मृ-त-क सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको हx-त्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा कि-टा-नी जाहेरी दिएको तर प्रहरीले कि-टा-नी जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसको वि–रोधमा सयौं माईतीजनले बुधबार दिउँसो त्यस प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।तीज मान्न माइती आएकी सीता आमा–बाबुलगायतका माइतीजनसँग तीजमा के के चिजहरु कि-नमे-ल गर्ने भन्ने बारे चर्चा पनि चल्दै थियो । त्यही क्रममा एक्कासी उनका श्रीमान टी-काको फोन आयो ।
‘ल आज साँझ तिमी घर आऊ दिदीको छोराको बर्थडे मनाउनु छ’ भन्दै टीकाले फोनमा भने । टीकाले पाल्पा तानसेनको हो-लाङ-दी जाने बाटोमा ‘दि दरबार कटेज एण्ड रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
उनले त्यहीँबाट श्रीमतीलाई तिमी घर जाँदै गर्नु म साँझ आउँछु भनेर घर पठाएका थिए । त्यसपछि उनी भदौ १९ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा माइत बाट घर हिडेकी थिइन् । माइतीजनले भने सीताको हx-त्या यो-ज-ना ब-द्ध गरिएको भन्दै न्या -यको खोजीमा छ ।
त्यसैदिन साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सिताका श्रीमान ससुराली आउँछन् र मेरो घरमा आई तपाईकी छोरी अब वि-ता-रा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउछु भनी ध -म्कीपूर्ण कुरा गरी अरु केही नबो-ली अगाडीको ढोका जोडले लगाउँदै हुँ -ईकि-दै त्यहाँबाट हिँडे हुन् ।मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँग–सगै छ । उनले म -दि -रा पिएको आ-भा-स हुन्थ्यो । त्यसलगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हा-ने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हा -न्दा पनि फोन उठेन ।
अर्को दिन विहान ५ बजेर २५ मिनेट जाँदा उनका श्रीमानको ८ सेकेन्ड मात्रै मिसकल आयो । हिजो जाँड र-क्सी पिएर केहीँ बोलिकी भनेर ए-स्क्यु-ज गर्न होला भनेर मैले कल ब्या-ग गरिन ।त्यस लगत्तै भाईलाई फोन आएछ । उनले मेरो घर आउनुस् भन्नुको सट्टा मेरो घरमा जानु भनेछन् । के के भयो र भनेर सोध्दा केही भएको छैन एउटा काम छ भनेछन् । सासु ससुरालाई फोन गरेर पनि मेरो घर छिट्टै जानुस् भने छन् ।
Last Updated on: September 9th, 2021 at 11:12 am